Gaga anao ve i Wilson amin'ny hosodoko menaka | Famoronana an-tserasera
"Alchemy", hosodoko menaka nataon'i Will Winson
Una asa hafahafa sy hafahafa ilay ananantsika amin'ireo andalana ireo avy amin'i Will Wilson izay ahitanao ny teknikan'ny solika lehibe. Karandoha iray izay ahitantsika karazana paddles isan-karazany. Loko voafantina tsara hanehoana asa mandrisika ny lolo dia iray amin'ireo mpiady.
Mpanakanto izay tsy mandalo media sosialy izany mba hifandraisany amin'ireo mpanara-dia azy amin'ny ho avy sy ireo mety ho voasariky ny sisa amin'ny asany an-tsary, izay misy sary hoso-doko menaka maro karazana izay mamorona ampahany lehibe ny sarin'olombelona sy ny sariny.
Will Winson amin'ity sary hosodoko solika ity tsy mamela anao tsy hiraharaha ary ataovy izay hitadiavanao ny karandohany izay lasa fitoeran-javatra ahitan'ireo mpanao paleta ampiasaina rehetra ny eritreritr'ity hosodoko ity.
Raha mijery ny sary hosodoko rehetra isika, dia mety ho gaga amin'ny famoronany toa ireny sary ireny fa amin'ny sary manomboka anio izay isehoan'ireo "endri-tsoratra" manan-javatra holazaina izy ireo, na dia misy haizina mistery aza.
Manana ny tranonkalanao ianao avy amin'ity rohy ity aiza no ahitana ny asany lehibe amin'ny sokajy isan-karazany toy ny sary, sary, biby na ny sarin'ny tena. Ity farany dia manaitra ny sainy ny endrika tsy mitovy ny mitovy amin'ny sisin-tany amin'ny hadalana amin'ny sasany raha ny hafa kosa ny tsy fandeferana eo alohan'ny fitaratra hanehoana ny tenany dia mampiavaka manokana.
Una fomba fijery manokana ny iray ananan'ity mpanao hosodoko ity amin'ny sary hosodoko tsirairay izay manana lafiny maizimaizina koa, indrindra fa ireo biby izay ananan'izy ireo toe-javatra marina sy hafa amin'ny mpanao hosodoko hafa. Raha mitady zavatra hahagaga anao androany ianao dia azo antoka fa hampikorontana anao i Wilson ary hanaloka anao amin'ny fotoana iray.
https://www.creativosonline.org/el-oleo-de-istvan-sandorfi.html mora raisina ny fanarahana an'i Wilson.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » "Alchemy", hosodoko menaka nataon'i Will Winson
Ny sarin'ny biby namboarina niaraka tamin'ny géometrika madio